China Sweet Ma uto mapụtara mapụtara Ribs factory na-emepụta | Huikang
Sweettọ na Uwe Mwepu Mpụtara (Sweet na Sour mapụtara mapụtara Ribs) bụ a nnọchiteanya omenala efere na a ụtọ na utoojoo uto. Ọ na-eji ọgịrịga anụ ezi dị ka isi ihe, anụ ahụ dị ọhụụ ma dịkwa nro, na agba nke efere emechara acha ọbara ọbara ma na-egbu maramara.
“Ihe ụtọ na uto” bụ ihe ụtọ niile isi nri China nwere. Ọkpụkpụ anụ ezi na-atọ ụtọ na nke gbara ụka sitere na Zhejiang ma bụrụ nri Zhejiang a na-ahụkarị.
Ezigbo anụ ezi anụ ezi na-atọ ụtọ dị iche iche gbasara usoro na ihe eji eme ya. N'ozuzu, a na-eji ọgịrịga na ọgịrịga ahụ. E kwesịrị iwepụ ọgịrịga anụ ezi site na ọbara, gbanye ya ma gbanye ya maka ekpomeekpo ahụ, wee tinye ya na ntụ ọka na nke miri emi ruo mgbe elu ahụ bụ ọla edo ma sie ike. Wepụta maka iji ya ma emechaa. Mgbe etinyere agba shuga, ọgịrịga ahụ ghere eghe na pan, n’ikpeazụ tinye ya na osikapa mmanya maka ụtọ na utoojoo. A ga-eji osikapa mmanya ebe a. Nri nke mmanya ochie siri oke ike ma metụta uto ahụ!
Ihe eji esi nri nri Shanghai na ato uto. A na-eji tomato ihendori na uto. Nke a bụkwa njirimara nke nri Shanghai. Nri Zhejiang juputara na ihe, nke oma, juputara na agba, isi na uto. Nri Sichuan bụ nhọrọ kachasị mma maka ọgịrịga anụ ezi ụtọ. Soro shuga, nnu na mmanya.
Ihendori maka anụ ezi anụ ezi na-atọ uto bụ nanị efere Shanghai na ihendori tomato. Nri Shanghai nwere uto ọkụ, ebe nri Zhejiang na efere Sichuan dị mkpa. Ahịrị anụ ezi na-atọ ụtọ nke nri Shanghai na nri Zhejiang bụ nri esiri esi, ebe ọgịrịga anụ ezi ụtọ na nke na-atọ ụtọ na nri Sichuan bụ nri a maara nke ọma na Sichuan. Ọ na-eji usoro esi esi nri miri emi. Ọ bụ nke ụtọ na utoojoo, ya na amba mmanụ, mmanụ na-esi ísì ụtọ na moisturizing. Ọ gbara ụka ma na-acha ọbara ọbara, ọ bụ ezigbo agụụ ma ọ bụ agụụ. Ndị China hụrụ m n'anya nke ukwuu.
Huaiyang dị ụtọ ọgịrịga nke anụ ezi na-atọ ụtọ jikọtara njirimara nke nri Zhejiang na nri Sichuan na usoro, wee jikọta njirimara nke nri Shanghai na uto. A na-eji ihe dị ụtọ na agba agba agba, yabasị na galik, jiri mmanụ wee sie. Akụkọ ihe mere eme nke ọgịrịga anụ ezi na nke uto emere na Huaiyang nri dị nkenke karịa nri atọ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Chongqing oseose ọkụkọ
Osote: Kung Pao Ọkụkọ
Ndị na-ekesa nri friji
Ejiri anụ ezi eji aka chekwaa